Ubume beSpeyin namhlanje bwakhiwa ngokufanelekileyo ngo-1579 xa iintsika zaseAragon neCastile zihlangene ngomtshato kaFerdinand no-Isabella. Iimbali zeSpeyin ziquka inkqubela yamaSulumane kunye nobukhosi behlabathi.
Incwadi kaPierson iye yanconywa njengembali yevolumu eyodwa yeSpain, okokuqala kukhetho kubafundi kunye nabafundi abaqhelekileyo ngokufanayo. Ngokuqinisekileyo kukho 'amaninzi' amaninzi, kuquka i-mini-biographies, umgca wexesha kunye nencoko yebhaloliyali! Okubaluleke ngakumbi, uPierson ubhale umbhalo ogqwesileyo obonelela ngokufudumele nokuthakazelisayo ovuma ukufundiswa kwamva nje.
Ukulandisa okumangalisayo kubandakanya iminyaka engama-250 yeembali ngendlela ecacileyo necacileyo. Isitala sikaKamen sifaneleka bonke abafundi - nangona isingeniso esiqhelekileyo sijoliswe ngokubanzi kubafundi okanye ngabaqalayo kwisihloko - kwaye izahluko ezicacileyo, ezisebenzise ngokupheleleyo iintlukwano, zifikeleleke ngokupheleleyo. I-glossary, iimephu, umndeni kunye ne-bibliography zongeza umxholo ophezulu.
Le ncwadi isebenzisa isakhiwo sokulandelelana kwexesha ukwenzela ukuba kubonelelwe ukuhlaziywa ngokufanelekileyo (nangona abanye bangathi bachanekileyo) ukuhlolwa kwembali yeSpeyin. Iimbali-mlando zaseSpeyin, eBrithani naseMelika ziye zafaka isandla, zinika ukudibanisa kakuhle kweembono ezivela kwihlabathi elithetha isiSpanish. Ukuba ufuna imibono emitsha kunye neendlela ezintsha eSpeyin kunye nembali efanelekileyo, zama oku.
ESpeyin ehlelwe nguRaymond Carr
Lapha, imbali yaseSpain ihlanganiswe kwiingqiniswana ezithandathu kuphela, ngasinye esibhaliweyo yinkcenkceshela kwintsimi echaphazelekayo kunye nezihloko ezinjengee-Visigoths kunye nezopolitiko zanamhlanje, kunye nemisebenzi yobugcisa. Ukudunyiswa kakhulu kwaye, ngokungaqhelekanga kwimbali, ngokucacileyo, iSpeyin iyabiza kakhulu kulabo emva kwesicatshulwa esisodwa kodwa kakhulu kunomntu onomdla obanzi.
Umlando Wezenhlalakahle WaseSpain wamanje ngo-Adrian Shubert
Nangona le ncwadi yenza ngokuchanekileyo njengoko isihloko sichaza - yimbali yentlalo yaseSpain ukususela ngo-1800 - inkcazo enjalo iyayigxininisa ubunzulu beetekisi eyaziwayo ngokupheleleyo ezichaphazelekayo zengingqi kunye nezopolitiko. Ngaloo ndlela, le ncwadi yenza iqalo eliqaqambileyo kumntu nabanomdla kubantu, ngokuchasene noorhulumente, weSpain yanamhlanje.
UMaorish waseSpain nguRichard Fletcher
Amakhulu eminyaka amaKristu aseSpeyin ahlasela inkumbulo yexesha apho uMbuso wama-Islamic wawulawula iSpeyin, kwaye sinyanisekile ukuba sisenomdla. Kodwa incwadi kaFletcher yile ngxelo echanekileyo yexesha elimnandi elivele libonakala kwimpikiswano yezopolitiko.
I-History of Medieval Spain ngoJoseph F. O'Callaghan
Lo msebenzi omdala ngumxholo oqhelekileyo we-Spain waseVasigoths ukuya kuFerdinand no-Isabella, kwaye ugcina ingqalelo yembali. Kuyakunzima ukuhamba kodwa kuyisicwaningci esihle sokwakha kunye nemisebenzi egxile ngakumbi.
Kungakhathaliseki ukuba iziphi iingcamango zakho kwiimeko zezopolitiko zobukhosi baseBasque, ayikho into yokuba uKrlansky unembali ebhaliweyo ebhaliweyo yabantu baseBasque - isicatshulwa kunye nesicatshulwa esibandakanya iifoto kunye nezindlela zokupheka - zizinto ezonwabisayo kunye nezinto ezikhanyisayo, kunye nokutshatyalaliswa okufudumeleyo kugweba ukukrakra okanye ukuzidla.
ISpeyin yamaKatolika amaKatolika 1474-1520 nguJohn Edwards
Isihloko asikwazi ukumela umxholo, kodwa le ncwadi inika isingeniso esibanzi ngexesha likaFerdinand no-Isabella. U-Edwards uhlanganisa uluhlu lwesifundo, kwiipolitiki ukuya kwiinkonzo ngendlela yemikhosi yemikhosi kunye neenkcubeko. Ngethamsanqa kubafundi, le mqulu ayinayo kuphela imfundo kwaye ikhuphisana kakhulu, kodwa iphinda ifunde ngokunyanisekileyo.
Umbutho waseSpeyin, u-1400-1600 nguTefifilo Ruiz
Ukumboza ixesha langaphambili kunokukhetha i-5, isicatshulwa sikaRuiz sichaza utshintsho kuluntu lwaseSpain phakathi kwexesha langaphambili kunye nelokufudumala. Isiphumo si-akhawunti enemibala kunye neyovuyo eguqula phakathi kwengxoxo ebanzi kunye nobomi bomntu ngamnye ukususela kwi-clergy ephezulu ukuya kumabhabhane aphantsi.
Uhambo luka-Armada lukaDavid Howarth
Inyaniso engelusizi kwimfundo yaseBrithani, kodwa abaninzi abantwana besikolo bayazi enye yembali yembali yaseSpeyin: i-Armada. Ngokuqinisekileyo, isihloko siragela phambili sibangel 'umdla kwaye le ncwadi eshibhile-kodwa ephezulu kakhulu isebenzisa imithombo yaseSpain ukubonisa umfanekiso opheleleyo.
UFilipu II nguPatrick Williams
Kwikhulu leminyaka elinesibhozo lesibini, uFilipu II wabusa, kungekhona nje iYurophu, kodwa iindawo ezinkulu zehlabathi, ezishiya ilifa eliyinkimbinkimbi abachazi-mlando abasakwazi ukuvumelana ngalo. Olu pho nonongo lusetyenziswa ngokulandelelana kwexesha ukuhlola ubunjani bokutshintsha kukaFilipu kunye nezenzo zakhe, abaxhasi bamakhosi kunye nabalandeli kunye nomlinganiselo wempembelelo yakhe.
ISpeyin: Iziko leWorld 1519-1682 nguRobert Goodwin
Njengoko unokuphetha kwesi sihloko, eli jongene laseSpeyin lijolise kwelinye lembuso yokuqala yaseYurophu, kodwa kusekho inxalenye enkulu yeYurophu ukuba yiloo nto oyifunayo. Le ncwadi enkulu, eyityebi neyintloko enokuyenza.
UJan Carlos: Ulawulo lwaseSpain ukusuka kwiDemocratic to Democratic Republic nguPaul Preston
Xa abantu beembali-mlando bekhulu lama-20 beza kuhlola uYan Carlos baya kufumana uPaul Preston phambi kwabo. Kule bografi, sibona ibali eliphawulekayo lomntu owayekwazi ukukhokela iSpeyin emva kweFranco aze ayibe njengedemokhrasi, xa ubuninzi bakhe ngobutsha bubonisa ukuba kuchasene. Kaninzi "
UFranco: I-Biography kaPaul Preston
Incwadi enkulu efuna ukuzinikezela ukuba iphumelele, le ngqungquthela yesigxina se-20 yeSpain yinkcazo yeklasi enye yeengcali ezikhokelayo. Kukho uphando olusisiseko kunye nebali elilawula iSanday lanamhlanje, zonke ziphathwa kakuhle. Ngomsebenzi omfutshane ujonge uMichael Street's 'Franco'. Kaninzi "
I-Oprichnina ka-Ivan i-Terrible: Icandelo 1, Indalo
Ukufa Akungabi Ngqhayiya
Injongo yePhini: I-Flagstick yeGalofu
Inambuzane eziqhelekileyo zePhobias kunye nendlela yokuphatha ngayo
Izinto Ezi-10 Awazizi Ngo-Albert Einstein
IiNkonzo Zokuphayona: Ukuhlolisiswa Kwendlela Yelanga
Iincwadi ezili-10 eziphezulu nge-Ecofeminism
Inkcazo yeSantya kwiFizikiki
Indlela Yokukhanyisa Amakhandlela e-Yahrzeit